फ्रान्सेली केक "Frese» (fraisier), अब विभिन्न संशोधनहरू भइरहेको जुन व्यञ्जनहरु, पहिलो राजा लुई XIV समयमा देखा पर्नुभयो। जीवनको पचासवां वर्ष द्वारा Intemperate सम्राट गम्भीर पेट समस्या पाउनु भएको छ। त्यसैले, आफ्नो व्यक्तिगत सलाहकार dietitian (साथै जासूस) उहाँलाई एक चमत्कार बेरी मिठाई रूपमा सल्लाह - स्ट्रबेरी। यो डाक्टर Antuanom डी Frese को नाम। 1714 मा भर्साइल्लेज बगैंचामा पहिलो स्ट्रबेरी बाली, स्थानीय "Michurinists" स्ट्रबेरी देखि हुर्किसकेका जो संकलित। र यो बेरी एक पोषणविद् को सम्मान मा नाम थियो - fraise। निस्सन्देह, राजा-उम्दा गर्न खुवाउनुभयो बस "नाङ्गो" स्ट्रबेरी महाराज हिम्मत गरेनन्। तर केक को मुख्य घटक रूपमा प्रयोग। "Freesia" - यसरी फ्रान्सेली भोजन को थप एक कृति जन्म भएको थियो। यसको तयारी लागि नुस्खा हामी यस लेखमा hostesses भन्नेछु।
तीन अन्डा को yolks देखि सफेद अलग। त्यसपछि बिस्कुट आटा सानना जस्तै अगाडि बढ्नुहोस्। प्रोटीन whisk नुन को एक चिम्टी संग। बिस्तारै चीनी को एक सय ग्राम अप भर्नुहोस्। अधिकतम गति मिक्सर beaters परिभाषित र प्रोटीन whisk चमकदार र स्थिर चुचुराहरूको गठन गर्ने। अन्डा yolks, पीठो (50 ग्राम), स्टार्च (बीस-पाँच ग्राम) र पाक पाउडर को एक चम्मच संग राम्रो मिश्रण। यो वेनिला चीनी एक झोला थप्न अनुज्ञेय छ। बिस्तारै प्रोटिन र पहेंलो भाग ठूलो संयोजन। सधैं एक दिशा मा र माथिबाट तल एक सर्कल मा एक चम्चा संग मुछ्नु। दुई पाक ट्रे को पाक कागज littered। तिनीहरूलाई समान रूप मा वितरण बिस्कुट आटा। केक "Freesia", हामी प्रस्तुत जो को नुस्खा, वर्ग केक को प्रयोग पनि समावेश छ। तिनीहरूले 180 डिग्री मा सात दस मिनेट Bake गर्न आवश्यक छ। पूर्ण केक शांत गरौं। सिद्धान्त, तपाईंले केक लागि राउन्ड विभाजित मोल्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, तल कागज, र स्नेहन तेल को किनाराको संग littered र पीठो संग छर्कियो। पकाना गर्दा बिस्कुट आटा ओवन ढोका खोल्न सक्दैन, वा crusts गिर। तर तिनीहरू तयार हुँदा, अलिकति ओवन खोल्नुहोस्। खाली दस मिनेट त्यहाँ खडा गरौं।
को क्रीम "Muslin" बनाउने
केक "Freesia" नुस्खा "muslin" भनिन्छ विशेष क्रीम recoat prescribes। उहाँले एक कस्टर्ड जस्तो देखिन्छ।
दूध दुई सय milliliters जोश। कोठा तापमान गर्न सुन्दर गरौं। तीन चिकन अन्डा, चीनी को एक गिलास हरायो। जनसंचार र साठी ग्राम स्टार्च ostuzhennoy दूध मा ध्यान भंग। दूध दुई सय milliliters एक फोडा गर्न ल्याउन। तातो ठूलो मा घनघोर। त्यसपछि कम गर्मी मा पैन राख्नु र सबै गर्दा तरल thickens सम्म एक चम्चा संग जगाएर, त्यसैले राख्नुहोस्। गर्मी हटाउन र अलिकति शांत गरौं। त्यसपछि घिउ र vzobem को आधा प्याक (एक सय ग्राम) थप्नुहोस्। को क्रीम पूर्ण तल cooled नभएसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तेल प्याकेजको बाँकी आधा थप्नुहोस्। अर्को vzobem पटक।
को बिस्कुट केहि ड्राई थिएनन्, हामीले केक भिगो। हामी पानी को एक सय ग्राम एक पट आगो मा राखे। को ताप चीनी खन्याउन हुनेछ रूपमा। सामान्य मा, हामी मीठो बालुवा को सत्तरी-पाँच ग्राम भंग गर्नुपर्छ। बारेमा पाँच मिनेट को कुल - पानी मा राम्रो-पकाएको। पूर्ण सिरप शांत गरौं। यो स्ट्रबेरी liqueur एक गिलास थप गर्नुहोस्। राउन्ड आकार व्यास 20-25 सेमी प्रयोग सुझाव केक "Freesia" नुस्खा गुना। तिनीहरूले यो स्लट मा फिट भनेर केक काटे। आफ्नो सिरप Impregnate। स्ट्रबेरी को सात सय ग्राम, बाला हटाउन मेरी। जामुन आधा कटौती र ledges फारम कस फैलाउन को भाग। तल मा बाँकी स्ट्रबेरी सर्टकेक प्रसार। राम्रो spreadable क्रीम (आधा वा दुई-तिहाई यो भन्दा)। दोस्रो Korzh संग कवर। Lubricates र बाँकी क्रीम। र तीन घन्टा को लागि फ्रिज हाम्रो कृति हटाउन।
यस सन्दर्भमा, सारा महाराज राय diverge। केक पहिलो "Freesia" सजिएको थियो? यस नुस्खा यसको बारेमा मौन छ। तर धेरै खाद्य केक चीनी पेस्ट को नाजुक स्वाद अधिभार सल्लाह छैन। यो भने कि grated चकलेट अनुरूप स्ट्रबेरी राम्रो को स्वाद। धेरै फ्रान्सेली केक "Freesia" मा दही ग्लेज संग तयार छ। यो गर्न धेरै सरल छ। सम्मेलन अवधिमा सानो सिरप केक र केही स्ट्रबेरी छोड्नुहोस्। Pyuriruem जामुन, को सिरप र कागति को रस केही थोपा थप्नुहोस्। कुनै फिलर संग बाक्लो र बोसो प्राकृतिक दही दुई चमचा यो चलाउनु सबै। पानी को एक सानो राशि मा gelatin पाँच ग्राम घुलनशील। मिश्रण थप्न र एक "लिनु" दिन। शीर्ष केक को जेली-जस्तो ठूलो पोख्नुहोस्।
संशोधन: बिस्कुट zhenuaz
धेरै confectioners उनको दिमाग "Freesia" कसरी फ्रान्सेली केक पकाउन थप परिष्कृत racked। तसर्थ, क्लासिक नुस्खा संग, त्यहाँ परिमार्जनहरू छन्। तिनीहरूलाई को एक बिस्कुट आटा zhenuaz छ। आफ्नो नुस्खा जेनोआ विकास, कि यसको किन नाम हो। एक कचौरा तीन अन्डा मा विभाजन, थप दुई yolks थप्नुहोस्। बाँकी प्रोटीन फ्रिज मा लुकाउन आवश्यक - तिनीहरूले नाजुक meringue केक सजाय Bake गर्न सक्नुहुन्छ। अण्डा बिट र तिनीहरूलाई पानी स्नान मा राखे। चीनी को 120 ग्राम निदाउँछन्। पाँच मिनेट whisk Whisk। आम रोशन गर्नुपर्छ। गर्मी हटाउन, उच्च गति मा beater र मिक्सर प्रतिस्थापन, अर्को पाँच मिनेट हरायो। जब आम तीन पटक वृद्धि हुनेछ, पग्लियो मक्खन को एक spoonful खन्याउन र पीठो को 120 ग्राम sieved। आटा मिश्रण। Zhenuaz बिस्कुट बारेमा बीस मिनेट मा 170 ° C एक preheated ओवन मा सुखा।
व्यञ्जनहरु "Freesia" तपाईं केक सजाउनु गर्न सक्ने क्रीम को एक किसिम मा प्रशस्त। तर अन्तर्गत स्पन्जले केक zhenuaz सर्वश्रेष्ठ meringue। यो कहिलेकाहीं भनिन्छ छ प्रोटिन क्रीम। यसलाई तयार गर्न, तपाईं पानी चीनी को एक सय र बीस ग्राम एक चालीस milliliters खन्याउन र हत्येदार बरतन मध्यम गर्मी मा राख्नु आवश्यक छ। अर्को, तपाईं चार राउंडर मा meringue पकाउन गर्न आवश्यक छ। एक मानिस चीनी गधा र caramelized, र अन्य दुई चाबुक गर्न सिरप stirs अन्डा को सफेद चमकदार चुचुराहरूको र दिगो सम्म। यो अघुलनशील चिसो पानी ग्लास मा एक थोपा छ, र माथि रोल्ड हुन औंलाहरु गर्न सक्ने एक नरम प्लास्टिक बल मा परिवर्तित छ जब सिरप तयार छ। मिक्सर प्रोटीन whipping जारी। बिस्तारै उम्लिरहेको सिरप खन्याउन। दुई मिनेट लागि हरायो। बाक्लो, चिल्लो स्थिरता यस्तो meringue राम्रो आफ्नो आकार राख्न र अलग छैन।
संशोधन: बादाम बिस्कुट
फ्रान्सेली बाहिर हामी एक सानो अलग केक Bake यदि संग स्ट्रबेरी "Freesia" स्वादिष्ट केक आउँछ। चिनी ठोस चुचुराहरूको 30 ग्राम गर्न whisk तीन प्रोटीन एक फ्रिज हटाउन। एक अन्डा र दुई yolks धुलो चिनी को 65 ग्राम संग triturated। बादाम को 65 ग्राम र 25 ग्राम सादा पीठो थप्नुहोस्। दस मिनेट को लागि हरायो। गाढा र बाक्लो को आम एक तरल, हावा र प्रकाश परिणत गर्नुपर्छ। ध्यान दिएर, scapula, तल माथि र केन्द्र प्रति पक्ष बाट देखि काम, को कुटपिट अन्डा को सफेद थप्न हलचल। एकदम browned गर्नुपर्छ 180 ° C Korzhi एक तापमान र seredinka बारेमा पन्ध्र मिनेट को लागि एक हट ओवन मा Bake - वसन्त रोक्न। बिस्कुट पूर्ण सुन्दर हुनुपर्छ।
पिस्ता क्रीम संग स्ट्रबेरी केक "Freesia"
हामी दुई केक तयार। तिनीहरूलाई लागि, तपाईं सबैभन्दा नाजुक बादाम बिस्कुट आटा मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं तयार बनाएको पिस्ता पेस्ट किन्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं purified unsalted पागल को एक सय ग्राम किन्न आवश्यक छ। पानी उम्लिरहेको तिनीहरूलाई भर्नुहोस्। तीन मिनेट पछि, पानी भोकमरी गर्न सकिन्छ। पिस्ता त्यसपछि छाला देखि सफा गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हामी 180 डिग्री मा दस मिनेट को लागि ओवन तिनीहरूलाई सुकेको। त्यसपछि Peremel धुलो चिनी को एक चम्मच संग आटा मा पागल। बादाम पाउडर 25 ग्राम संग मिश्रित। चिनी पचास ग्राम पानी दुई चम्मच उबलते भंग। यो सिरप को नट मिश्रण मा हालिएको थियो। मुछ्नु। गंध बादाम सार लागि dropwise थपिएको थियो। को पिस्ता पेस्ट , एक तयार कस्टर्ड संग पिटे र घिउ थप्न। अर्को - व्यापार उपकरण। पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री इकट्ठा र एक स्वादिष्ट मिठाई सजाउनु छ। खानपान!
को mentality एक प्रतिबिम्ब रूपमा राष्ट्रिय भोजन
पाठ खाना पकाउने: कसरी दूध संग प्यानकेकहरू बनाउन
चिकन संग पास्ता: सम्भव विकल्पहरू
अवधारणा र प्रशासनिक जिम्मेवारीका सिद्धान्तहरू
चयन गर्न कसरी र कसरी बेडरूम मा ओछ्यानमा राख्नु
लन्डन वा न्यूयोर्क: कहाँ अचल सम्पत्ति को मूल्य भन्दा छिटो बढ्दै छ दुनिया मा 13 शहर
Shugaring: को फाइदा र बेफाइदा, मूल्यहरू समीक्षा
चाँडै र सही तरिकाले घरमा एक हल्लालाई कसरी फ्याँकियो
मनोरञ्जन केन्द्र "Togot" Baikal: स्थान, सेवा र समीक्षा
भाषणले - यो के हो? भाषणले प्रकार। भाषणले को धारणा